VirtualBox တပ်ဆင်ရန်နှင့် configure ဘယ်လို
VirtualBox ကို Install လုပ်ခြင်းများသောအားဖြင့်အချိန်အများကြီးမယူပါဘူးဆိုကျွမ်းကျင်မှုမလိုအပ်ပါဘူး။ အရာအားလုံးစံ mode မှာတွေ့ကြုံတတ်၏။ ယနေ့တွင် VirtualBox installed နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပရိုဂရမ် settings မှတဆင့်သွားပါ။ VirtualBox တပ်ဆင်ခြင်း 1. Run ကို Download ဒေါင်းဖိုင်ကို VirtualBox-4.3.12-93733-Win.exe ။ သငျသညျကို run သောအခါ Setup ကို Manager ကို install လုပ်ဖို့လျှောက်လွှာများ၏အမည်နှင့်ဗားရှင်းဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
VirtualBox ပေါ်မှာ Android ကို Install
VirtualBox ပင်မိုဘိုင်းက Android ကနေကွဲပြားခြားနားသော Operating System နဲ့ကို virtual စက်တွေကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုရနိုင်မယ်ဆိုရင်။ ဤဆောင်းပါး၌သင်တစ်ဦးဧည့် OS ကိုအဖြစ်က Android ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်။ ကိုလည်းကြည့်ပါ: တပ်ဆင်ခြင်း, အသုံးပြုခြင်းနှင့်တစ်ဦးကို virtual machine ပေါ်တွင်အန်းဒရွိုက်ကိုထည့်သွင်းဖို့သူတို့ရဲ့မူရင်း format နဲ့ VirtualBox ကို Android ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးပုံရိပ်တွေကို configure မဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း, developer များကိုယ်တိုင်ကို PC ဗားရှင်းတစ်ဦးဆိပ်ကမ်းကိုမပေးပါဘူး။
VirtualBox အတွက် shared folders တက်ချိန်ညှိခြင်း
တစ်ဦးထက်ပိုအဆင်ပြေကို virtual operating system ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအဘို့, VirtualBox အတွက်ဖြန့်ချိပါကအများပြည်သူဖိုလ်ဒါကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ကညီတူညီမျှအိမ်ရှင်နှင့်ဧည့်သည်စနစ်တွေကနေလက်လှမ်းသူတို့ကိုအကြားအချက်အလက်များ၏လွယ်ကူသောလဲလှယ်မှုအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ အများပြည်သူဖိုလ်ဒါမှတဆင့် VirtualBox အတွက် shared ဖိုလ်ဒါ, အသုံးပြုသူအိမ်ရှင်စက်ပေါ်ပေမယ့်ဧည့်သည် OS ကိုမသာဒေသအလိုက်သိမ်းဆည်းထားဖိုင်များကိုကြည့်ရှုကိုသုံးနိုင်သည်။
တိုးချဲ့မှုအထုပ် VirtualBox တိုးချဲ့မှု Pack ကို Install
VirtualBox တိုးချဲ့မှု Pack ကို - add-ons တွေကိုအထုပ် default အနေဖြင့်မသန်စွမ်းသော VirtualBox features တွေထည့်သွင်းထားသည်။ Oracle က VM က VirtualBox တိုးချဲ့မှု Pack ကိုတပ်ဆင်အထုပ်ကိုစတင်နောက်ထပ် ado မရှိရင် Download လုပ်။ 1. ဒေါင်းလုပ်။ တရားဝင်က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသွားပါနှင့်သင့်ဗားရှင်းများအတွက် software ကိုအထုပ်ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ ဗားရှင်း "- အကြောင်းအကူအညီ" မီနူးသွားတွေ့နိုင်ပါသည်။
VirtualBox virtual machine အတွက်သင့်လျော်သော Network configuration များအဆုံးစွန်သောအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောအပြန်အလှန်များအတွက်ဧည့် operating system ကိုမှအိမ်ရှင်ချိတ်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌, VirtualBox ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ parameters တွေကို setting နှင့်အတူစတင်သည်တက်ချိန်ညှိခြင်း Windows7ကို run နေတဲ့ virtual machine အတွက်ကွန်ယက်ကို configure ။
VirtualBox CentOS အတွက် Set
CentOS တစ်ဦးလူကြိုက်များ Linux ကို-based စနစ်များပင်ဖြစ်သည်, ဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်, များစွာသောအသုံးပြုသူများသည်သူမ၏တွေ့ဆုံရန်ချင်တယ်။ သင့်ရဲ့ PC မှာတစ်စက္ကန့် operating system အဖြစ်က Install - မဟုတ်လူတိုင်းအတွက်တစ်ခု option ကို, ဒါပေမယ့်အစား VirtualBox လို့ခေါ်တဲ့ကို virtual, အထီးကျန်ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာအတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
VirtualBox ပေါ်မှာ Linux ကို Installing
Linux ကို OS ကိုအများအပြားသည်အသုံးပြုသူများမှစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သူမ၏ Windows ကိုအစားထိုးရန်ဝံ့။ သို့သျောလညျး, သင်သည်ဤပလက်ဖောင်း၏လုပျငနျး၏အဓိကရလျှင်, Windows ကိုမြင်ပါလိမ့်မည် - (အထူးသဖြင့်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်၏အမြင်၌) တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာမဟုတ်ဘူး။ ပထမဦးဆုံးအသငျသညျ Linux ကိုတစ်ဦးကို virtual machine ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ကိုမည်သို့နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။
VirtualBox အတွက် shared folders Creating နှင့် configuring
တစ်ဦးကို virtual machine တ VirtualBox (လျှော့ - vB) နဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါမကြာခဏအိမ်ရှင် OS နဲ့နောက်တစ်ကြိမ် VM သူ့ဟာသူအကြားသတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ဤသည်က Shared ဖိုလ်ဒါကို အသုံးပြု. အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ Windows OS ကို run နေတဲ့ PC နှင့်ဧည့်သည် OS ကို add-ons တွေကို installed ယူဆနေသည်။ ဒီအမျိုးအစား Shared Folder ကို Folders အသုံးဝင်မှုရှိစေရန် VM က VirtualBox သည်။
VirtualBox ပေါ်မှာ Windows XP ကို ​​install လုပ်နည်း
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့ VirtualBox အစီအစဉ်ကိုသုံးပြီးတစ်ဦးကို virtual operating system အဖြစ် Windows XP ကို ​​install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်။ ကိုလည်းကြည့်ပါ: သင်တဲ့စနစ်ကိုထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီက Windows XP ကိုများအတွက် Virtual Machine ကိုဖန်တီး VirtualBox သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို, သင်ကတစ် Virtual Machine ကိုဖန်တီးရမယ် - ၎င်း၏ Windows ကိုအပြည့်အဝ-စုံတဲ့ကွန်ပျူတာအဖြစ်ကိုရိပ်မိပါလိမ့်မည်။
VirtualBox ပေါ်မှာ Windows7ကို install လုပ်နည်း
ငါတို့ရှိသမျှသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ချမှတ်ခြင်း၏တစ်ခုခုစတင်ရန်, စနစ်၏ setting သို့တူးစမ်းသပ်ဖို့ကိုချစ်ကတည်းကဒါဟာစမ်းသပ်ဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံရာအရပျကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဤအရပ်ဌာနကိုကျနော်တို့ VirtualBox Virtual Machine ကိုစတင်ပါရန်ရှိသည် (လျှော့ vB) ကအသုံးပြုသူတစ်ဦးအပြည့်အဝရုရှား interface ကိုအတူ window ကိုမြင်သည်ဆိုပါက VirtualBox မှာ Windows7ကို install တစ်ဦးကို virtual machine တကြလိမ့်မည်။
VirtualBox ဧည့်ထပ်တိုး Installing
VirtualBox ဧည့်ထပ်တိုး (ဧည့် operating system ကို add-on) - ဧည့်သည် operating system ကိုတပ်ဆင်နှင့်အိမ်ရှင် (အစစ်အမှန်) OS ကိုအတူပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်များ၏စွမ်းရည်များချဲ့ထွင်ကြောင်း extension ကိုအထုပ်။ Add-ons တွေကိုဥပမာ, သင်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်မျှဝေဖိုလ်ဒါဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်ဖိုင်တွေဖလှယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမပါဘဲကွန်ရက်အဖြစ်အင်တာနက်ကို virtualke မှဝင်ရောက်ခွင့်ကနေ Virtual Machine ကိုပေါင်းသင်းခွင့်ပြုပါ။
Disk ကို VirtualBox တိုးမြှင့်ဖို့2ဖြစ်စဉ်ကို
သငျသညျ VirtualBox အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုသူတစ်ဦး Virtual Machine ကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာသူဧည့်သည် OS ကို၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်မီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်လိုသည်ငွေပမာဏကိုသတ်မှတ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်, အချိန်ကျော် gigabytes ၏မရွေးအရေအတွက်ကတိုတောင်းကို run ထားပြီး, ပြီးတော့လက်ရှိကို virtual သိုလှောင်မှုပမာဏတိုးပွားလာ၏မေးခွန်းကိုဖြစ်လိမ့်မည်။
VirtualBox ပေါ်မှာ Kali Linux ၏ phased တပ်ဆင်ခြင်း
Kali Linux - သမားရိုးကျက ISO-image ကိုနှင့်ကို virtual စက်တွေများအတွက်ပုံတစ်ပုံ၏ပုံစံအတွက်အခမဲ့အခြေခံပေါ်မှာဖြန့်ဝေသောဖြန့်ဖြူး။ အဖွဲ့ဝင်များ VirtualBox virtualization တစ် LiveCD / USB မှတ်အဖြစ် Kali ကိုသုံးနိုင်သည်သာမက, ဒါပေမယ့်လည်းဧည့်သည် operating system အဖြစ်ကတည်ထောင်ရန်။ သငျသညျသေး VirtualBox (လျှော့ vB) မတပ်ဆင်ရသေးလျှင် VirtualBox ပေါ်မှာ Kali Linux install လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေ, ထို့နောက်သင်တို့သည်ငါတို့၏လမ်းညွှန် အသုံးပြု. ဒီလုပ်နိုင်ပါတယ်။
VirtualBox ပေါ်မှာ Ubuntu ကို install လုပ်ခြင်း
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့ VirtualBox ပေါ်မှာ Linux ကို Ubuntu ကို install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုမှာကြည့်ရှုမည် - အစီအစဉ်ကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Virtual Machine ကိုဖန်တီးရန်။ ဒီချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုကို virtual machine ပေါ်တွင် Linux ကို Ubuntu ကို install လုပ်ခြင်းသင့်ရဲ့အဓိက OS နဲ့ disk ကို Partition ထပ်မပိုင်း reinstall ရန်လိုအပ်ကြောင်းအပါအဝင်ရှုပ်ထွေးထိန်းသိမ်းရေး၏နံပါတ်ဖျက်သိမ်းရေး, သင် system ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြသည်စမ်းသပ်ဖို့အဆင်ပြေလမ်းကို install လုပ်ဖို့ကူညီပေးပါမည်။
0x80004005 VirtualBox အတွက်အမှားအယွင်းများဖယ်ရှား
သငျသညျ VirtualBox virtual machine ထဲမှာ Windows သို့မဟုတ်တစ်ဦးကို Linux operating system ကို run ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ, အသုံးပြုသူတစ်ဦးမှားယွင်းမှုတစ်ခု 0x80004005 ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ operating system ကိုက load မဆိုကြိုးပမ်းမှုစတင်သည်နှင့်ကာကွယ်ပေးသည်ခင်ကတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိပြဿနာပပျောက်ကူညီခြင်းနှင့်ပုံမှန်မုဒ်တွင်ဧည့်သည်စနစ်ကသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။
VirtualBox ကို USB device ကိုမမြင်ရပါဘူး
VirtualBox အတွက်အလုပ်မှာအတော်များများသည်အသုံးပြုသူများကို virtual စက်တွေမှကို USB devices တွေကိုချိတ်ဆက်များ၏စိန်ခေါ်မှုကိုရင်ဆိုင်ကြရသည်။ အမှားမတိုင်မီ controller ကို support ကို၏ရိုးရှင်းမရှိခြင်းကနေဒီပြဿနာအကွာအဝေး၏ Properties ကို "ဟု virtual machine မှကို USB-device ကိုအမည်မသိ device ကိုချိတ်ဆက်ဖို့မလုပ်နိုင်ပါ။ "
အကြောင်းရင်းနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ: VirtualBox ကို run မနေပါနဲ့
တည်ငြိမ်သောအလုပ်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ VirtualBox virtualization tool ကို, ဒါပေမယ့်မရှိတော့ကြောင့်မှားအသုံးပြုသူ settings ကိုဖွင့်ပါသို့မဟုတ်အိမ်ရှင်စက်ပေါ် operating system ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ရှိမရှိ, အချို့သောဖြစ်ရပ်များ၏ရလဒ်အဖြစ် run လိမ့်မည်။ VirtualBox start ရန်မအောင်မြင်ခဲ့ပါ: အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအချက်များ၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ VirtualBoks အစီအစဉ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
VirtualBox virtual machine အတွက် port forwarding ကိုပြင်ပအရင်းအမြစ်ကနေဧည့်သည် operating system ကိုအပေါ်ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒီ option က user ကိုဖွင့်လှစ်ရာဆိပ်ကမ်းများနှင့်ပုဂ္ဂလိကထားခဲ့ဖို့ရာရှေးခယျြနိုငျကတည်းကတံတား mode ကို (တံတား) မှချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစားကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ပိုကောင်းပါတယ်။
VirtualBox - virtualization များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအစီအစဉ်များ၏တဦးတည်း။ ဒါဟာသင်ကွဲပြားခြားနားသောအပြင်အဆင်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော operating system မြားအောကျတှငျကို virtual စက်တွေကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲကိုစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးစနစ်များအဘို့ကြီးသောအဖြစ် OS အသစ်ကိုနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရရန်မလွယ်ကူ။ VirtualBox - VirtualBox ပေါ်မှာကွန်ပျူတာအပိုဒ်တစ်ဦးကကွန်ပျူတာ။
VirtualBox ပေါ်မှာ Remix OS ကို Install လုပ်ခြင်း
ယနေ့တွင်သင်သည် VirtualBox နှင့်အတူရောနှော OS ကိုများအတွက် Virtual Machine ကိုဖန်တီးနှင့် operating system ကို install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်။ ကိုလည်းကြည့်ပါ: 32/64-bit နဲ့ configurations များအတွက်တာဝန်ခံအခမဲ့ဖြန့်ဝေပုံကိုဒေါင်းလုပ် Remix Remix OS ကို operating system ကို: VirtualBox အဆင့် 1 ကိုအသုံးပြုဖို့နည်း။ သင်ဤ link ကိုမှာတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
https://termotools.com my.termotools.com © VirtualBox 2019